“Cadaalad darro ayay noqon lahayd haddii aan adkaan lahayn, waayo 5-baas xitaa waa isku xiri waynay.” – Gool FM
“Cadaalad darro ayay noqon lahayd haddii aan adkaan lahayn, waayo 5-baas xitaa waa isku xiri waynay.”
(Spain) 28 Nof 2016. Tababare Luis Enrique ayaa aaminsan in kooxdiisa Barcelona ay nasiib ku lahayd isla markaana mucjiso ahayd inay bar-baro kala soo tagaan garoonka ay sagaalka sano ku soo adkaan la’yihiin ee kooxda Real Sociedad.
Lionel Messi ayaa bar-baro u keenay Barcelona kaddib goolkii furitaanka ee Willian Jose iyadoo kooxda ku ciyaarta Anoeta ay ku gacan sarreysay kulanka.
Carlos Vela ayaa labo jeer birta u garaacay Barcelona iyadoona la diiday gool uu Juanmi u dhaliyay kooxdiisa Real Sociedad, halka Barcelona ay sameysay labo shuut oo qura ay goosha la beegsatay kulan lagu sheegay inuu ahaa mid ka mid kuweedii ugu xumaa xilli ciyaareedka.
“Haddii aan eego natiijada kulanka waa qiimeynta ugu fiican aan bixin karo kal ciyaareedkan.”. Luis Enrique ayaa sidaa u sheegay Barca TV.
“Inaan ku dhammeysano 1-1 waa mucjiso, inaan guuleysano waxay noqon lahayd cadaalad darro waa inaan u hambalyeeyo Real Sociedad.
“Xitaa waan kari waynay inaan isku xirno 5-baas, kubbada la’aanteed waxaynu ahayn masiibo.
“Waxay cadaadis nagu saareen 6-ciyaartooy, waana heli waynay meel aan ku sameyno baasaska dhexe iyo baasaska dhaa-dheer.
“Qeybtii labaad ee dheesha xoogaa waa soo hagaagnay laakiin ma ahayn wax aslanba nagu filan. Waxaan ku bar-bareynay kulanka kubbad ay si gaar ah u wada ciyaareen Messi iyo Neymar.
“Uma qalmin inaan dhibic kula soo laabano Barcelona.”.
HOR DHAC: Inter Vs. Fiorentina
Sidee loo kala hoggaaminayaa haatan gooldhalinta horyaalka Serie A ee Waddanka Talyaaniga?... (Ka bogo 10-ka sare)